ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၆)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၆)
နေကတအားပူနေတယ်.. လူတွေ ကားတွေ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားနေတဲ့ ကြားက လျောက်လို့သွားနေမိတယ်။ နေ့လည်ကြီး ဒီလောက်မူးနေအောင် သောက်ထားပေမဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဇင့်ရဲ့အရိပ်အယောင်တွေက ဖျောက်မရပါ။ ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ခဏရပ်ပြီး မျက်လုံးကို အားစိုက်ခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ လေးငါးရက်လောက် မလဲဘဲ ထားထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေက ဟောင်းနွမ်း နံစော်လို့နေပြီ။ ငါ ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲ ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ ...... ?
ငါက ဘ၀ပျက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလား။ လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ အရက်ပုလင်းထဲမှ အရက်ကို အကုန်မော့လိုက်ပြီး ပုလင်းခွံကို လမ်းဘေးက အုတ်နံရံဆီ ပစ်ပေါက်ခွဲလိုက်တယ်။ အရက်ရှိန်က ပိုတက်လာတော့ ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး ဖြစ်ချင်လို့လာတယ်။ တစ်ချက် ဟန်ချက်ပျက်လိုက်တာ အသိထဲ ငါမူးတာမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာကြီးလည်သွားသလို ဖြစ်သွားပြီး နားထင်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ရိုက်ချက်တစ်ခုကြောင့် “ ဖောင်း ” ကနဲ အသံနဲ့ အတူမျက်လုံးထဲ မီးတစ်ချက်ပွင့်သွားသည်။ ထို့နောက် နာကျင်မှုက ၀င်လာလို့ မျက်လုံးကို အားစိုက်ကြည့်တော့ ငါ ပလက်ဖောင်းနဲ့ မိတ်ဆက်သွားတာပဲ။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့ အကြည့်မျိုးစုံတွေနဲ့ ကြည့်နေတာကို မှောက်လျက်သားမှ မျက်လုံးလေး တစ်လုံးနဲ့ မြင်နေရတယ်။ ကြိုးစားကုန်ရုန်းပြီး ထပေမဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းကို မသယ်နိုင်တော့တာကြောင့် ပလက်ဖောင်းပူပူမှာ ပေကပ်ပြီး ခဏနားနေတဲ့သဘောနဲ့ အမောဖြေ မှေးနေလိုက်တော့တယ်....။
ဆောင်းဝင်လာလို့ထင်တယ် အေးချမ်းတဲ့ အရသာကို ခံစားနေရသလို အရက်အလွန်အကျွံသောက်ထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ထင်တယ် သတိရတာနဲ့ ခေါင်းကကိုက်တက်လို့လာတယ်။ မှောင်နဲ့ မည်းမည်း မျက်လုံးကို ကြိုစားဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ ဘေးနားက စောင်တစ်ထည်ကို စမ်းမိလို့ ဆွဲယူခြုံလိုက်တယ်။ စောင်ခြုံကွေးနေတော့မှ တစ်ချက်လန့်သွားပြီး အသိဝင်လာလို့ ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ ငါ့အိမ်ပဲ ထင်တယ်။ အနံအသက်ကတော့ ငါ့အိမ်ပါပဲ။ ချမ်းနေတယ် ဆိုတာ အဲယားကွန်းကြောင့်ပဲ။
ငါ့ကို အ်ိမ်ဘယ်သူ ခေါ်လာတာလဲ။ ငုပ်တုပ်ထထိုင်လိုက်တော့ ခေါင်းမှဆစ်ကနဲ ဖြစ်သွားသလို ဗိုက်လည်းဆာလာသလို ရေလည်းတအားသောက်ချင်လာတယ်။ ရေငတ်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ကြိုးစားကုန်းရုန်းထပြီး မီးဖွင့်လိုက်တယ်။ မျိုးကျော်အိပ်တိုင်း ဘယ်တော့မှ မီးပိတ်ပြီး မအိပ်တတ်ပါ။ မီးဖွင့်လိုက်တော့ ကိုယ့်အခန်းကို သေချာကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ငါ့အခန်းသေချာပါတယ်။ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၁ နာရီတောင် ဖြစ်နေပါလား... နေအုန်းငါ နေ့လည်က လမ်းမှာ… သတိရလို့ နားထင်ကို တစ်ချက်စမ်းလိုက်တော့ နည်းနည်းအောင့် နေတယ်...
“ ဟင် ”
ကုတင်ဘေးက ခုံမှာလည်း အမျိုးသမီး အိတ်လေး.. မြင်ဖူးသလိုလို..
မျက်မှောင်ကျုံ့စဉ်းစားလိုက်လို့ ထင်တယ် ခေါင်းကကိုက်လာလို့ နောက်မှစဉ်းစားမယ် ရေအရင်သောက်မယ်ဆိုပြီး ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်။
အိမ်အောက်ရောက်တော့ ဧည့်ခန်းထဲ တစ်ချက်မျက်စိက ရောက်သွားတယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက် စောင်လေးခြုံပြီး အိပ်နေတာကိုတွေ့လို့ အနားနား ကပ်ကြည့်တော့.. တင်မိုးနိုင်..ဖြစ်နေသည်။ သူ ဘယ်ကနေဘယ်လို ရောက်နေတာလဲ.. ဘာလာရှုပ်တာလဲ မသိဘူး... ၀ူးးးး.. ရေအရင် သောက်မယ်ဆိုပြီး ထမင်းစားခန်းထဲက ရေခဲသေတ္တာကို အရင်ဖွင့် ရေကိုကမန်းကရမ်းသောက်ချလိုက်တော့သည်။ ရေ၀င်သွားလို့ ထင်တယ် ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိဘဲ အရက်တွေချည်း ရှိနေပုံရတယ်.. ခေါင်းတွေ ဝေတက်လာလို့ ပြန်ဖြေရအောင် အရက်ပုလင်းကို ရှာလိုက်တော့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ မသောက်ခဲ့တဲ့ အဖေ့ရဲ့ အရက်တွေ ဒီလောက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှမထင်ခဲ့… စိတ်ထဲပျော်သလိုရှိတာနဲ့ အဖုံးဖွင့်ပြီး ခွတ်ထဲတောင် မထည့်ပဲ မော့မယ် အလုပ် လက်တစ်စုံက အရက်ပုလင်းကို တားလာတော့တယ်..
“တော်တော့လေဟယ်.. ရပ်ပါတော့ဟယ်... နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ...”
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို မျက်လုံးတွေ မီးတောက်မတတ်ဖြင့်ကြည့်ရင်း....
“ကိုယ့်ဘာသာနေစမ်းပါ... နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ ငါ့အိမ်ကို...”
“နင် မူးလဲနေလို့ ငါ တိုင်စီနဲ့ ခေါ်လာတာ အိမ်ရောက်တော့ နင့်မှာ အိမ်သော့မှလည်း မပါဘူး.. ကံကောင်းချင်တော့ ခြံစောင့်ဦးလေးနဲ့ တွေ့လို့ နင်ကံကောင်းတာ....”
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာက မတင်းမမာ တလုံးချင်းပြောနေတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့အသံတွေက စိတ်မကောင်းတဲ့ အသံတွေလား ဂရုဏာအသံတွေလား မသိ။ မျိုးကျော်စိတ်ရှုပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့လက်တွေကို အတင်းဖယ်ရင်း အရက်ကို မော့မယ်လုပ်တော့..
“တော်တော့လို့ ပြောနေတယ်နော်.... နင် ဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါ့ကို ပြောစမ်းပါ...”
“နင်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး... နင့်ဟာနင် အေးဆေးနေ...”
“ဘာလို့ ငါနဲ့ မဆိုင်ရမှာလဲ... နင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ ပြော..... ပြောလေ....”
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း အရက်ကို မနားတမ်းမော့ ချလိုက်ပြီး... မျက်နှာကြီးမဲ့ကာ...
“ငါ ဘာဖြစ်ချင်နေလဲ နင်သိလား...”
တင်မိုးနိုင် ခုတော့လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့
“ဟားဟားးဟား... ငါ ဖြစ်ချင်တာ က တော့... နင် လာရာ လမ်းအတိုင်းပြန်တော့ ...”
“ငါ့ဘ၀က နင်က အစပြုလို့ မိန်းမကြောင့် ဘ၀ပျက်ရတော့မယ့်သူတစ်ယောက်... ဘာမှ အသုံးဝင်မဲ့ သူမဟုတ်ဘူး... နင်သွားတော့...”
“မျိုးကျော်ရယ်... ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟယ်.. ”
“နင် ပြန်တော့လို့ ပြောနေတယ်နော်...”
တင်မိုးနိုင် မျက်နှာကို လက်နဲ့အုပ်ငိုပြီး အိမ်ရှေ့ကို ထွက်ပြေးမယ် လုပ်ပြီးမှ သူ့အိတ်မေ့ကျန်ခဲ့လို့ ထင်တယ်.. ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်ကို ပြေးတက်သွားတော့တယ်။ သူပြေးတက်သွားတာကို နောက်ကနေ သေချာကြည့်မိတော့ စိတ်ထဲ အရက်တန်ခိုးကြောင့်လား တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကို သေချာကြီး ကြည့်မိလိုက်တော့ စိတ်တွေက ကြွတက်လာလို့ သူနောက်ကလိုက်သွား လိုက်တယ်.။
တင်မိုးနိုင် အခန်းထဲရောက်တော့ သူ့ အိတ်လေးကို ယူပြီးပြန်ထွက်မယ် အလုပ်... မျိုးကျော်အခန်းပေါက်ဝမှာ အခန်းတံခါးကို မှီပြီးရပ်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူအခန်းတံခါးကို လော့ချလိုက်ပြီး တင်မိုးနိုင်အနားကို ကပ်လာတော့ တင်းမိုးနိုင် ယောက်ျားနဲ့ တကယ် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ဂျောင်ပိတ်မိနေပြီမို့ အသားတွေ တဆက်ဆက်တုန်ခါ မျက်ရည်တွေ ၀ိုင်းလို့ခါ တက်လာပါတော့တယ်....။
တင်မိုးနိုင် အိတ်လေးကို ရင်ဘတ်ကြားထည့်ထားပြီး ရှေ့တိုးရမလိုလို နောက်ဆုတ်ရတော့မလိုလို ဖြစ်နေတုန်း။ မျိုးကျော် ရှေ့ကို တလှမ်းချင်းတိုးလာလို့
“မျိုးကျော် ခဏလေးနော်... နင်ရှေ့ကို တိုးမလာနဲ့ အုန်း... ”
“နင် ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့ ငါ့ဆီမလာနဲ့ .. ”
“ဟား ဟား ဟား... နင်သာ အစထဲက အရာရာကို နားလည် မာန်တွေလျော့မယ် ဆိုရင် ငါ့မှာ ဘာမှဖြစ်စရာ အကြောင်းကို မရှိဘူး.... ခုတော့...”
မျိုးကျော် အံကိုကြိတ်ရင်း.. အရက်တန်းခိုးကြောင့် ရီဝေပြီး နီတွက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနှင့်အတူ အနားသလို့ တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်ရင်း တင်မိုးနိုင် တကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးကြည့်ပစ်လိုက်သည်။
“မျိုးကျော် ငါတောင်းပန်ပါတယ်...ဟယ်.. ငါ... ငါ အိမ်ပြန်ချင်တယ်”
တင်မိုးနိုင် ပြောနေတုန်း မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို အတင်းချုပ်ကိုင် ထားလိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ကို ရုန်းကန်ထုရိုက်နေလို့ တင်မိုးနိုင်ကျောဘက်က နေရာယူပြီး သေချာပယ်ပယ်နယ်နယ် ချုပ်ကိုင်ထားလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ရုန်းနေပေမဲ့ အချည်းနှီးပါ။ မိုးကျော်လက်တွေကလည်း ချုပ်နေရင်းတန်းလန်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့တွေရော ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ ဆုပ်ကိုင်နယ်နေလို့ တင်မိုးနိုင် ကြောက်လန့်တာလား ရှက်တာလား ဒေါသထွက်လာတာလား မသိ အားကုန် ရုန်းနေတော့တယ်။ မျိုးကျော်လည်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အသိမဲ့ ရှက်ရမ်းရမ်း ဒေါသစိတ်တွေရဲ့ ရုန်းအားကို မနည်းထိန်းနေရတာမို့ တင်မိုးနိုင်ကို ကုတင်ပေါ်ပစ်တင် ဖိလှဲထားလိုက်တယ်...။
“မျိုးကျော်... ငါ့ကို အဲလို မလုပ်နဲ့ နော်... ငါလိုချင်တာ အဲဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး....ဟယ်.. ”
“တော်စမ်းပါ မိန်းမတွေ.. က ဒီအတိုင်းပဲ.... နင် လိုချင်တာ ငါမသိဘူး... ငါလိုချင်တာပဲ ငါသိတယ်.. ”
“မျိုးကျော် ငါ့ကို အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဟာ... ငါတောင်းပန်ပါတယ်... ငါအဲလိုကြီးငါ့ဘ၀မှာ အဖြစ်မခံပါရစေနဲ့ ငါကြောက်တယ် မျိုးကျော်ရယ်... နင်နဲ့ ငါနဲ့ ဒီလောက်ထိ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပုံမျိုးတွေ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ.. ငါ့ကို အကြမ်းနည်းနဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဟာ ....ငါ့ကို သနားပါအုန်း..”
မျိုးကျော်တစ်ယောက် မှောက်လျက် ဖြစ်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင် ရဲ့ကိုယ်လေးကို ဆွဲလှန်ရင်း ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ တက်ဖိထားလိုက်တော့တယ်။ နောက် တင်မိုးနိုင် ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကြားထဲ သူခန္ဓာကိုယ်ကို အတင်းကြားဝင်လိုက်သည်။ သူ့ကိုရိုက်လာတဲ့ တင်မိုးနိုင် လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းဆွဲထုတ် ဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ အကျီရှိနေပေမဲ့ မို့မောက်ကားထွက်နေတဲ့ သူ့နို့အုံကို ပါးစပ်နဲ့ဆုပ်နယ် ကိုက်ခဲတော့တယ်။ ဒီလို လုပ်လိုက်တော့ မျိုးကျော်ရဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီလေး ၀တ်ထားပေမဲ့ ဒုတ်ကအတော်ကြီးကိုထောင်ပြီး မာတက်လာတာမို့ သူ့ ပေါင်ကြားက ရွှေခရုလေးနဲ့ အတင်းဖိကပ်ခါ ထောက်ထားလိုက်တယ်။
တ၀က်တပျက်လန်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့ထမီ နဲ့အတူ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ကျွန်တော်ရောက်နေပြီမို့ သူ အဖို့ ရုန်းကန်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ပါ။ တချက်တချက် အောက်ခံဘောင်းဘီတွေ ကိုယ်ဆီရှိနေသေးပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဒုတ်နဲ့ သူ့ ရွှေခရုအပေါ်ကို လေးငါး ချက်လောက် ဆောင့်ပြီး တွန်းထောက်လိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင်ကို ချုပ်နေတုန်း မျိုးကျော်မှာလည်း သူ့အ၀တ်အစားတွေကို တဖက်က ချွတ်လာတာမို့ ... တင်မိုးနိုင် ကျွန်တော့်ကို စားတော့ဝါးတော့မယ် ပုံနဲ့ ကြည့်နေတယ်။ နောက်မှ သူစိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားလာပြီး...
“မျိုးကျော်... နင် စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါဟယ်.. ငါကြမ်းတာ မကြိုက်ဘူးဟယ်.. အနုနည်းနဲ့ သုံးပါလား... နင်ငါ့ကို ဒီနည်းနဲ့ တော့ မဆက်ဆံသင့်ဘူးဟယ်.. ”
မျိုးကျော်မရတော့ပါ မူးကလည်းမူးနေ အစကလည်း လုပ်ပြီးပြီမို့ တင်မိုးနိုင် ဘောင်ဘီအသေးလေးကို စတင်ဆွဲချွတ်လိုက်တာမှာတော့ တင်မိုးနိုင် ဒေါသငယ်ထိပ်ရောက်သွားပြီး ခြေကောလက်ကော ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရှိသမျှ အားကုန် ထုရိုက်တွန်းထိုး ရုန်းပါတော့တယ်..
“ဟဲ့ကောင် မျိုးကျော် .. နင်က ငါ့ကို ဘာမှတ်နေတာလဲ ... နင်..က ငါ့ကို ယုတ်မာတော့မယ်ပေါ့... နွားစိတ်တွေ ဖြစ်လာတာပေါ့.. ဖယ်စမ်း... ငါ့ကို လွှတ်စမ်း... နင့်ကို ငါသတ်မယ်… နင်ငါ့ကို မုဒိန်းကျင့်နေတာပေါ့ လေဟုတ်လား.... ငါ့ကို နင်ဘာမှတ်နေလဲ... လွှတ်စမ်း... သေစမ်း သေစမ်း..”
တင်မိုးနိုင် ပြောပြောနဲ့ လက်ပြန်ကော လက်ဝါးကော လက်သည်းနဲ့လည်း ကုတ်လိုက်တာကြောင့် မျိုးကျော်တချက်အထိအားပြီး ..“ အား..”..လို့ အော်ရင်း တစ်ချက်ရပ်သွားတော့ တင်မိုးနိုင် အောက်ကနေ ပက်လက်ကလေး မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနဲ့ မျိုးကျော်ကို ကြည့်နေတယ်။ မျိုးကျော် သူခေါင်းတွေ သူ့ပါးပြင်တွေမှာ တင်မိုးနိုင်ရိုက်ထားလို့ ဖူးရောင် နီတွတ်ရောင်ရမ်းတာထက် သူ့ရင်ဘက် လက်သည်းရာ အစင်းကြောင်းမှ သွေးတွေစို့လာပြီး အတော်နာသွားဟန်တူတယ်... မျိုးကျော်ရဲ့ ရုပ်ဟာ ချက်ချင်းပြောင်းသွားတာ တင်မိုးနိုင် မြင်လိုက်ရပါပြီ။ ဒေါသမုန်တိုင်းနဲ့ အတူ ခက်ထန်မာကျောမှု အပြည့် ယောက်ျားတို့အား ဘယ်မိန်းမ ခံနိုင်ရိုးနည်း.. မျိုးကျော် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ခါလက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ပြီး ပက်လက်လှန်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ကို သူဝတ်ထားတဲ့ အကျီကနေတဆင့် သူ့အားကြီးနဲ့ ဆွဲမလိုက်ရာ တင်မိုးနိုင်မှာ စက္ကူလေးလားအောက်မေ့ရအောင် မျိုးကျော်လက်ထဲ ဖျက်ကနဲ့ ပါလာပြီး.. မျိုးကျော် တင်မျိုးနိုင်ရဲ့ အကျီကို အားနဲ့ ဆောင်ဆွဲ ဆွဲဖြဲလိုက်ရာ.. တင်မျိုးနိုင် လှမ်းတားချိန်တောင်မရလိုက်.. အကျီမှာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားသည်။ မျိုးကျော် လက်ကျန် ဘော်လီကို အတင်းဆွဲချွတ်တော့ ကြိုးကမာနေတော့ တော်တော်နဲ့ မကျွတ်.. အချွတ်ခံရတဲ့ တင်မိုးနိုင်မှာ အသားတွေပွန်းပဲ့ နီရဲကာ နာကျင်လှတာ တကြောင်း ကြောက်လာတာ တကြောင်း အသံပင်မထွက်နိုင်ဘဲ... တွင်တွင်သာ ငိုနေတော့တယ်...။
တင်မိုးနိုင် ငိုနေပေမဲ့ မျိုးကျော်ကတော့ သူ့ ဒေါသနဲ့ အတူ ရပ်မဲ့ပုံမပေါ် ဘော်လီကြိုးကို အားနဲ့ ဆောင့်ဆွဲလိုက်ရာ.... ဘော်လီကြိုးပြတ်ထွက်သွားလေပြီ။ ၀င်းဝါအိစက်ပြီး ကားထွက်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့တွေကကြောက်ပြီး တဆတ်ဆတ်ခုန်နေသလို အတင်း ဆောင့်ဆွဲချွတ်ထားတော့ လက်ရာတွေ ပွန်းရာတွေနဲ့ နီရဲလို့နေတယ်... အပေါ်ပိုင်းကို ချွတ်ပြီးသွားပြီမို့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကို တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရုန်းကန်မှုကင်းစွာချွတ်လိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင်.. ကိုယ်လုံးလေးမှာ ထမီသာ သူ့ခါးလယ်မှာ ကွင်းလုံးစွတ်နေတာကလွဲလို့ ဘာအ၀တ်အစားမှမရှိ။
တင်မိုးနိုင် မျက်ရည်တွေနဲ့ တဆက်ဆက်တုန်ရင်း မျိုးကျော်ကို မော်ကြည့်နေတယ်။ မျိုးကျော်ကတော့ နို့တွေကို ဆုပ်နယ်စုပ်နမ်းရင်း တင်မိုးနိုင်ပေါင်ကို အတင်းကားရင်း သူ့ဒုတ်ကို လက်တဖက်နဲ့ ကိုင်ခါ တင်မိုးနိုင် ရွှေခရုကြားလေးထဲကို တေ့ ထားလိုက်တော့သည်...။
ဒုတ်က တင်မိုးနိုင်ရွှေခရုလေးရဲ့ အပေါက်ဝနားတပ်ထား ပေမဲ့ ချက်ချင်းမလုပ်သေးပေ။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့လေးကို အားရပါးရ ကုန်းစုပ်နေမိတယ်။ တင်မိုးနိုင် ငြိမ်သက်လို့ သွားပါပြီ။ မျိုးကျော် သူ့ဒုတ်ကို တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးထဲ အားစိုက်ခါ ထိုးထည့်မယ်လုပ်ပြီး တချက် တင်မျိုးနိုင်မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်မျက်နှာမှာ မျက်ရည်တွေ အပြည့်... အားကုန်ရုန်းထားသလို နွမ်းလျနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း မျိုးကျော်လက်ချက်ကြောင့် ပွန်းပြီးနီတွက်နေသလို သူ့တကိုယ်လုံးလည်း တဆက်ဆက်တုန်နေသည်။ မိန်းမောနေပြီး အားပြတ်နေတဲ့ လူတယောက်အသွင်ဖြစ်နေသည်။ တင်မိုးနိုင် မျက်လုံးလေးတွေ ဖွင့်ထားပေမယ့် မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံလျက် အောက်ကနေ ငိုမဲ့မဲ့ အမှုအယာဖြင့် မျိုးကျော်ကို လက်အုပ်လေး ချီခါ..
“မျိုးကျော်ရယ်… ရှစ်ခိုးပြီး တောင်းပန်ပါတယ် ငါ့ကို သနားပါဟယ်… နင်နဲ့ငါ ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့ သဘောထားပြီး ငါ့ကို ဒီလိုအပြုမှုမျိုးကြီးတော့.... မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟယ်… ဒီလိုဖြစ်သွားရင်.. ငါ့ကိုငါလည်း ဒီတစ်သက် ခွင့်လွှတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး…. ငါ့ကို သနားပါဟယ်… ငါ့ ထပ် ရှစ်ခိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်….. ”
တင်မျိုးနိုင် ပြောပြောနဲ့ ငိုလေပြီ.. မျိုးကျော်လည်း တင်မျိုးနိုင်ပြောလိုက်တဲ့ ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားလိုက်တော့ အသိစိတ်တချက်ဝင်လာတယ်။ သြော်… ငါ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ငါ့ရဲ့ကိုယ့်ကျင့်တရားတွေ …. ဒီ မိန်းမတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ.. ငါက ဘာစလုပ်မိလို့လဲ… “ တောက် ”..
တောက်တချက်ခေါက်ခါ…. မျိုးကျော် စိတ်တိုလာလို့ တင်မိုးနိုင်ကိုလည်း လုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့တာမို့ “ ဟာ ” သက်ပြင်းချတာလိုလို မကျေနပ်ချက်တွေကို သည်းခံလိုက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ တင်မိုးနိုင်ကိုခွလျက်သား အတိုင်း ကုတင်ကို လက်သီးနဲ့ တစ်ချက်ထိုးပြီး .... တင်မိုးနိုင်အပေါ်မှ ဘေးဘက်ကို... မှောက်လျက်သားလိမ့်လှဲချ လိုက်တော့တယ်…။
“သွားတော့..နင် ငါနဲ့ ….အဝေးဆုံးကို သွား…… သွား……. ထွက်သွားတော့ဟာ..… ”
မျိုးကျော် ဒေါသထွက်ခါ အော်နေပေမယ့် တင်မိုးနိုင်တစ်ယောက်တော့ အားကုန်ရုန်းကန်ထားရတဲ့ အရှိန်ကြောင့် အေးစက်လေးကွေးတဲ့ ပုံနဲ့ ထနေရသလို ကိုယ်မှာ အ၀တ်ဆိုလို့ ခါးက ကွင်းလုံးလေးလိမ့်နေတဲ့ ထမီးလေးပဲရှိတာမို့ အရှက်ကိုဖုံးဖို့ အတွက် သူ့အ၀တ်အစားတွေကို ဘေးဘယ်ညာရှာလိုက်ပြီး ၀တ်မယ်လုပ်တော့ အကျီကော ဘောလီပါ ပြန်ဝတ်လို့မရအောင် စုပ်ပြဲလို့ နေလေပြီလေ.. ဒါကြောင့် တင်မိုးနိုင် သူ့ဘေးမှာ ..တွေ့တဲ့ စောင်လေးကို လှမ်းယူခြုံ.. နာနေတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို လက်လေးနဲ့ နှိပ်နယ်ရင်း ခေါင်းလေးငုံ့ခါ ရှိုတ်ကြီးတငင် ငိုပါတော့တယ်…
“ဟာ… နားငြီးတယ်ဟ …. တိတ်စမ်း…. နင်ပြန်တော့… လေ .... ဘာလုပ်နေတာလဲ.. နင့်ကို ငါ့ဘ၀မှာ ဘာမှအလိုမရှိဘူး…. နင်ထွက်သွားတော့…..”
မျိုးကျော် အမူးကလည်းမပြေသေး ဒေါသစိတ်ကလည်း ရှိသေးသမို့ မှောက်အိပ်နေရင်းမှ တင်မိုးနိုင်ကို အော်ငေါက်လို့နေလေပြီ။ တင်မိုးနိုင် တကယ်ကို ၀မ်းနည်းသွားသလို မျိုးကျော်သူ့ကို ဒီလိုကြီး ဆက်ဆံလာမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ထားခဲ့ဘူး။ တွေးလေ ၀မ်းနည်းလာလို့ တင်မိုးနိုင် တိုးလို့သာ ငိုနေပါတော့တယ်။
ရက်စက်လိုက်တာ မျိုးကျော်ရယ် ခုချိန်ကြီး ငါဘယ်လို ပြန်ရမလဲဟာ.. နောက် ငါ့မှာ ၀တ်ဖို့ အ၀တ်အစားဆိုတာလဲ နင် ဆုပ်ဖြဲလိုက်လို့ ၀တ်မရတော့ဘူးလေဟာ.. နောက် ငါတကိုယ်လုံးကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်ခဲနေပြီဟယ် ငါ့မှာ အင်အားဆိုတာ မရှိတော့ဘူးဟယ်.. နင် အတော်ရက်စက်တာပဲ.. နင်ပြောရက်တယ်ဟယ်.. ငါ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် သိလား… ငါနင့်ကို တကယ်ချစ်လာတာပါဟာ… နင့်ဆီလာတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီလို အကြမ်းနည်းသုံးတာတော့ ငါ ဘယ်လိုလက်ခံလို့ ရမလဲဟယ်.. ငါတကယ်ကြောက်လွန်းလို့ပါ … မျိုးကျော် မှောက်အိပ်နေတာကို ကြည့်ပြီး တင်မိုးနိုင် စိတ်ထဲ ပြောလို့သာ ငိုနေတော့တယ်….
မျိုးကျော်ကတော့ တင်မိုးနိုင်ကို လှည့်ပင် မကြည့်ချင်တော့လို့ နားပိတ် အတွေးရပ်ခါ အရက်ရဲ့ အရှိန်လေးနဲ့ အိပ်ချလိုက်တော့တယ်..။ အော်သံလိုလို ငြီးသံလိုလို တချက် ကြားလိုက်လို့ မျိုးကျော် အိပ်ယာမှ ထထိုင်လိုက်တယ်သည်။ အသံက မိမိအခန်းထဲမှ အသံဖြစ်သည်။ အခန်းတစ်ခုလုံးမှောင်နေတော့ ဘာမှမမြင်ရ။ အရက်အရှိန်ကြောင့် တစ်ချက်ဝေကနဲ ဖြစ်သွားပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုမစိုက်နိုင်။ အော်သံလိုလို ငြီးငြူသံကို နားနဲ့ဆက်ဆက် ကြားလိုက်ရတာပါ။ မီးခလုပ်ရှိရာကို ကြိုးစားသွားပြီး မီးကို ဖွင့်လိုက်တော့ “ ဟာ…”… တင်မိုးနိုင်.. တင်မိုးနိုင်… သွေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကပ်ကျီးနဲ့ ဗိုက်ကို ထိုးထားလျက် တန်းလန်းကြီး .. တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာမှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ ဆိုပေမဲ့ ခက်ထန်မာကျောတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ မျိုးကျော်ကိုကြည့်နေလေရဲ့… မျိုးကျော် သူလုပ်လိုက်မိတဲ့ အမှားတွေ အတွက် နောင်တတွေသတီကြီးရရင်း တင်မိုးနိုင်ကို ပြေးပွေ့ဖက်လိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့လက်ထဲမှာတင် ပျော့ခွေသွားတော့တယ်။ သူ တင်မိုးနိုင်နာမည်ကို တသွင်သွင်အော်ခေါ်ပြီး လှုပ်နှိုးလို့နေတယ်။
ငါ မှားပါတယ် ... တင်မိုးနိုင်ရယ် …ငါနင့်ကို အဲဒီလောက်ထိ မယုတ်မာသင့်ပါဘူး.. နင်ဟာ ဖြူစင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါဟာ… ငါမှားပါပြီ… ငါမှာခဲ့ပြီး.. ငါ့ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ ငါနောင်တတွေ ရပြီဟာ… ငါလေ နင့်ကို ချစ်ခဲ့တာပါဟာ… နင်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကသာ ငါ့ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေတာ ပျက်စေခဲ့တာပါ.. နင့်မှာဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး…. တင်မိုးနိုင် အဲဒီလို ဘာလို့လုပ်ရတာလဲ ဟာ….. တင်မိုးနိုင် …တင်မိုးနိုင်.. …… မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို လှုပ်နှိုးနေပေမဲ့ .. တင်မိုးနိုင် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေပြီး လောကကြီးက အပြီးအပိုင်စွန့် ခွာသွားပြီလေ… ။ မျိုးကျော် တစ်ယောက် မယုံနိုင်အောင် တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေ ကျလာခါ …. တင်မိုးနိုင် နာမည်ကို အော်ခေါ်လို့နေတယ်……………..
“တင်မိုးနိုင်……... တင်မိုးနိုင်……... တင်မိုးနိုင်……… ”
မျိုးကျော် လန့်နိုးသွားတယ်။ တကိုယ်လုံးဇောချွေးတွေ ပြန်နေသလို ပြန်တွေးမိနေတယ် ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ပြီး ငါ အိမ်မက်မက်နေပါလား.... နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက်.. ၈ နာရီတောင် ထိုးနေပြီ။ ပြီးတော့မှ…အိမ်မက်ထဲက တင်မိုးနိုင်ကို သတိရမှ … လန့်ဖြန့်ခါ တင်မိုးနိုင်ကိုရှာကြည့်တော့.. တင်မိုးနိုင် ကုတင်ပေါ်မှာ ဆိုပေမဲ့ သူ့ကုတင် ခြေရင်းနားမှာ ခွေခွေလေး အိပ်နေတယ်။ သူ တင်မိုးနိုင်ကို သေချာကြည့်တော့ ဘာမှမဖြစ်။ သက်ပြင်းလေးချပြီး တင်မိုးနိုင်ကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို တကယ်သနားမိသွားတယ်။ တင်မိုးနိုင်ရယ် နင့်မှာ ဘာအပြစ်မရှိပါဘူးဟယ်…
ငါ နင့်အပေါ် မကောင်းတာပါဟာ... ငါ နင့် အပေါ် ဒီလိုလုပ်တာ မတရားဘူး… သူငယ်ချင်း မပီသဘူးဟာ… ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟယ်…. နင်ဟာ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ပါ.. ငါနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူး… ငါ့ဘ၀က ထွက်သွားပါတော့.. ကြည့်ပါအုန်း အိပ်နေလိုက်တာ.. ညက ကိုယ်လက်တွေ နာပြီး အတော်လေး ပင်ပန်းသွားတယ် ထင်တယ်။ တညလုံးငိုနေတာ ကြားရတယ် ဘယ်အချိန်မှ အငိုရပ်ပြီး အိပ်သွားတာလဲ မသိပါဘူး…. ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟယ်… နင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလို့ရပြီဟယ်.. သွားပါတော့ ငါ့ဘ၀နဲ့ ငါသာရှိပစေတော့ ဟယ်....
မျိုးကျော် သက်ပြင်းခပ်သဲ့သဲ့လေး ချပြီး အိပ်ယာပေါ် အသက်မဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလား ပစ်လှဲချလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေမိတယ်။ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး ခဏမှေးနေတုန်း အိမ်အောက်ထပ်မှ အသံပလံတချို့ကို သေချာကြားလိုက်ရတော့တယ်။ ဒါ အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး… တကယ်ပဲ အိမ်အောက်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရောက်နေပြီ။ သူခိုးပဲ ဖြစ်မယ်.. အိမ်စောင့်ကြီးကတော့... မနက် ၆ နာရီ မထိုးခင်ကတည်းက ပြန်ပြီ….။ သူကဘယ်တော့မှ အိမ်ထဲကို ၀င်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ သူမဟုတ်ရင် သူခိုးပဲဖြစ်မယ်။ အရင် သူတစ်ယောက်ထဲနေတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ သူခိုးဝင်ဖူးတယ်။ အဲတုန်းက ဘေးအိမ်တွေက သတိထားမိလို့ ရဲခေါ်လိုက်တာ ရဲတွေရောက်လာပြီး သူခိုးကို ရဲတွေနဲ့အတူ နပန်လုံး ဖမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ သူခိုးပဲ ဖြစ်ရမယ်…
မျိုးကျော်ကုတင်ပေါ်မှ “ ၀ုန်း ” ကနဲ့ ထခါ ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီး တံခါးနား ပြေးကပ်လိုက်တယ်။ ကုတင်တုန်ခါ မှုကြောင့် တင်မိုးနိုင် အိပ်မှုံစံမွားပုံစံနဲ့ နိုးလို့လာတယ်…မျက်စိကို ပွတ်သပ်ရင်း…. မျိုးကျော် ဖြစ်အင်ကို မြင်လိုက်တော့… မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံ ပြူးဖြစ်လာတော့သည်။ မျိုးကျော် ဖြစ်နေတဲ့ ပုံကလည်း အိမ်အောက်မှာ သူခိုးရောက်နေလို့ လန့်ဖြန့်ပြီး တံခါးနား ကုန်းကုန်းကွကွ ကပ်နားထောင်နေတဲ့ ပုံဆိုတော့ တင်မိုးနိုင်ပါ လန့်ဖျန်ပြီး..“ ဘာဖြစ်တာလဲ…” အသံကတိုးပေမဲ့.. မျိုးကျော် အသံမထွက်နဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပါးစပ်ကိုလက်ချောင်းလေးတပ်ပြီး မျက်လုံးပြူးပြတယ်။
မျိုးကျော်မှာ ဒီလောက်နှင့် မပြီး အိမ်အောက်က အသံလာတာ သေချာသလောက်ရှိတာမို့ ဗီရိုပေါ်တင်ထားတဲ့ ဒုတ်ကို ပြေးယူဆုပ်ကိုင်ထားတော့ တင်မိုးနိုင်မှာ ကုတင်ပေါ်တွင်ပင် မထိုင်နိုင်တော့ပဲ မျိုးကျော်အနားပြေးလာခါ..
“ဘာလုပ်တာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ….ငါ..ကြောက်တယ်..နော်…. ငါကြောက်လာပြီနော်…….”….
မျိုးကျော် ဇောချွေးတွေလည်း ပြန်နေရင်း တင်မိုးနိုင်ဘက် အသာလှည့်ခါ …ခပ်တိုးတိုးလေး အသံထွက်တယ် ဆိုရုံလေး
“အိမ်အောက်မှာ သူခိုးရောက်နေတယ်…တိုးတိုး..” …
တင်မိုးနိုင် မျက်နာမှာ သွေးမရှိတော့ပါ သူခိုး ဆိုတော့ အတော်လေးကြောက်သွားဟန်တူပါတယ်။
“မျိုးကျော် ငါကြောက်တယ် နော်… သေပါပြီဟယ်..ရဲခေါ်ပါလားဟယ်…”
ဒါပေမဲ့ အခြေအနေက ပိုဆိုးလာလေပြီ…. အိမ်အောက်က အသံက သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး သေချာကြားရလိုက်လို့ပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီအသံက အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ အသံပါ။ ဟုတ်တယ်.. သေချာတယ် လူတစ်ယောက် လမ်းလျောက်လာတဲ့ အသံ…။ လျောက်လာတာမှ မျိုးကျော်အခန်းကိုပါ။ မျိုးကျော်ရင်ထဲမှာလည်း အတော်လေး ကြောက်စိတ်ဖြစ်မိနေသလို ဇောချွေးတွေကလည်း တသွင်သွင်စီးကာ နေသလို လက်ထဲက ဒုတ်ကို တင်းကျပ်စွာ ကိုင်ထားရင်း ၀င်လာရင်တော့ ရိုက်မှာပဲ ဟု ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်လေပြီ။ တင်မိုးနိုင်မှာတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိတော့ သူကိုယ်တိုင် အသံကြားနေရတော့ မျိုးကျော်လက်မောင်းကို နောက်ကနေ တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားနေတော့တယ်။ အသံက မျိုးကျော် အခန်းရှေ့တွင် ရပ်သွားလေပြီ။ တခဏကြာတော့… တံခါးက အသံမြည်လာတယ်……
မျိုးကျော် ဒုတ်ကို ခေါင်းအပေါ်တင် သေချာချိန်ရွယ်ထားပြီး တံခါးကို အသာဖွင့်နေတုန်း တံခါး အကုန်မပွင့်ခင်မှာပဲ အပြင်က အသံလေးကြားရတော့တယ်…
လက်ထဲမှာလည်း ဘုရားသောက်တော်ရေဖန်ခွက်ကို ကြွေပန်းကန်သေးသေးလေး ပေါ်တင်ထားပြီး ကိုင်ထားတဲ့ အမေကိုတွေရတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အမေလမ်းလျောက်တိုင်း အသံကမြည်နေတာ။ မျိုးကျော်ရော တင်မိုးနိုင်ပါ ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားသလို နှစ်ယောက်သား အံ့သြပြီး အမေ့ကို ကြောင်ကြည့်နေကြသည်။ မျိုးကျော်မှာတော့ သူခိုးလူမိတဲ့ ပုံနဲ့ အမေကို ဘာပြောရမှန်းကို မသိ… တသက်နဲ့ တကိုယ် ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ မရှုပ်ခဲ့သလို။
အဖေနဲ့ အမေက မိန်းမယူဖို့ တိုက်တွန်းတိုင်း အကြောက်ကန်ငြင်းတဲ့ သားက မိန်းမတယောက်ကို အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားရုံတင်မက.. အိပ်ခန်းထဲတွင် တစ်ညလုံး မနက်ထိ ရှိနေတာကို အမေတစ်ယောက်က မြင်တော့ ဘယ်လို့ မျက်နှာပြရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး… ၀ူးးးး……..အမေတို့ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုရောက်နေတာပါလိမ့်…။
“သားတို့ နိုးပြီးဆိုရင် မျက်နှာသစ်တော့လေ… အမေ သားကြိုက်တဲ့ ပဲပြုပ်ထမင်းကြော်ထားပြီးသား သားတို့ပြီးရင် ပူတုန်း စားရအောင်အောက်ကို ဆင်းလာတော့နော် သားကောင်မလေးပါ ခေါ်ခဲ့နော်…”
အမေသူ့ဘာသူ ပြောပြီးထွက်သွားလေပြီ။ မျိုးကျော်တံခါးပိတ်ပြီး ဘာပြောလို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ.. တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဇီးရွက်လေးလောက်သာ ရှိပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေတော့တယ်။ မျိုးကျော်လည်း အတော်စိတ်ညစ်သွားလို့ ခေါင်းကိုသာ တဗျင်းဗျင်းကုတ်ရင်း တင်မိုးနိုင်ဘက်လှည့်ပြီး သက်ပြင်းချကာ ....
“ကဲ… ရေသွားချိုးတော့ မြန်မြန်….”
“ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဟယ်..… ငါသေသာသေချင် လိုက်တော့တယ် ဟာ… ငါကြောက်တယ်…. ဒုက္ခပါပဲ ဟယ်…”
မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ တင်မိုးနိုင်ပြောလိုက်တော့… မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ဘက်လှည့်လာပြီး…
“ကဲ.. နင်ပြော နင်ကဘယ်လို လုပ်ချင်လို့လဲ…. ဘာလုပ်နိုင်သေးလို့လဲ…. ငါဘာမှ မပြောချင်ဘူး နင်ကြိုက်တာသာ လုပ်တော့……. ”
မျိုးကျော် ပြောလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ရေချိုးခန်းထဲသို့ ၀င်သွားတော့သည်။ တင်မိုးနိုင် ရေချိုးပြီးနောက် မျိုးကျော် ရေ၀င်ချိုးနေသည်။ တင်မိုးနိုင် တယောက်ထဲ ဘာမှမရှိတဲ့ အလှပြင်မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ... ၀တ်ထားတာလဲ ကြည့်အုန်း ကို့ယို့ကားယားနဲ့ မျိုးကျော် ရှပ်အင်္ကျီကြီး ... ဆံပင်တွေ သေချာစုသိမ်းပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြင်လိုက်ပေမဲ့ မျက်နှာကိုလည်း ဘာမှလိမ်းစရာမရှိ ရှေ့မှာတွေ့တဲ့ ရေမွှေးပုလင်းကို ခလောက်ရင်း အကျီကိုတော့ ဆွတ်လိုက်မိတယ်။ ဒုက္ခပါပဲ မျိုးကျော် အမေတွေတော့ ငါ့ကို မိန်းမပျက်ထင်ပြီး ရိုက်ထုတ်တော့မလားမသိဘူး.. ငါ မိန်းမကောင်းပါ သူတို့ အဲဒီလို မြင်ပါ့မလား။
မျိုးကျော်ကလည်း ငါ့ကို အမြင်မကြည်ရတဲ့ ကြားထဲ သွားပါပြီ ငါ့ဘ၀တော့.. တင်မိုးနိုင်တစ်ယောက်ထဲ တော်တော် စိတ်ညစ်လို့ သွားလေပြီလေ.. ခဏကြာတော့ မျိုးကျော် ရေချိုးပြီးလို့ မျိုးကျော် အကျီဝတ်ပြီး နှစ်ယောက်သား အိမ်အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာတော့သည်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ မျိုးကျော်နောက်မှ ကုပ်ချောင်းကုပ်ချောင်းနှင့်.. အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းဆင်းချင်း မျိုးကျော် သူ့အဖေကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အကြည့်ချင်းရဲပါဘူး... ဆိုပြီး အဖေ့ကိုကြည့်နေတဲ့ အကြည့်ကို ဖယ်မယ်လုပ်မှာ အဖေက မျိုးကျော်တို့ နှစ်ယောက်ကို မျက်မှန်လေး အသာပင့်ကြည့်ပြီး သူလည်းကဗျာကယာ မျက်လုံးကို အောက်ချခါ သတင်းစာကို ဆက်ဖတ်နေတော့တယ်။ သွားပြီ အဖေတော့ ငါ့ကို ဘာလိုထင်သွားပြီလဲ မသိတော့ဘူး.. မီးဖိုချောင်က ထမင်းဝိုင်းနားရောက်တော့ အမေလုပ်သူက ထမင်းကြော်တွေ အဆင်သင့် ခူးခပ်ထားတာ ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ....
“ အယ်…. သားတို့ သမီးတို့ ဆင်းလာပြီ… လာထိုင်… သမီးထိုင်…..”
တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော် အမေကို တချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မျိုးကျော် ၀င်ထိုင်သော ခုံဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်နေတယ်။
“ဖေကြီးရေ… လာတော့လေ.. သားနဲ့ သမီးတောင် ရောက်နေပြီ… စားရအောင် ဗိုက်ဆာနေပြီ ဟုတ်လား …. မနက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘာမှ မစားဘူးလေ…သားဖေကြီးက…လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကျွေးတာလည်း ဘာမှမစားဘူးလေ သားဖေကြီးက သိတယ် မဟုတ်လား.. ”
မျိုးကျော် မျက်မှောင်လေး ကုပ်ရင်း… သူ့အမေနား ကပ်ပြီး တိုးတိုးလေးမေးလိုက်တယ်…
“အမေတို့ အိမ်ကို ဘယ်အချိန်ရောက်တာလဲ ”
“မနက် ၇ နာရီလောက်ရောက်တာလေ သားရဲ့ ဘာလို့လဲ သားရဲ့…”
ထပ်မေးချင်နေပေမယ့် အဖေ၀င်လာလို့ အမေ့ကို ခေါင်းပဲ ခါလိုက်တယ်… အဖေကတော့ သူ့ခုံမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း… ချောင်းတချက် စတင်ဟန့်လို့ နေပေပြီ။ ဒါသူ့စတိုင်… တစ်ခုခုကို ဘ၀င်မကျတာတို့ မေးချင်လာတာတို့ဆိုဒီလိုပဲ…. မျိုးကျော်ရင်ထဲ အတော်လန့်လို့လာလေပြီ။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ ပြောဖို့ရန်မရှိတော့ပြီ။ ဘယ်ကိုထွက်ပြေးရပါ့မလဲ လို့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ထမင်းကြော်ပန်းကန်ထဲက ထမင်းကြော်ကိုသာ ခေါင်းငုံ ကြည့်လို့နေတော့တယ်။ မျိုးကျော် အမေကတော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အကျီကိုကြည့်ရင်း ရယ်နေပေမယ့် သူ့အဖေကတော့ ခပ်တည်တည်ကြီး ကြည့်နေရင်းမှ..
“ဒီ မိန်းကလေးက…. ”
မျိုးကျော်ရဲ့ အဖေက တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်နေရင်း မေးနေရင်းမှ စကားကို တ၀က်တပျက် ရပ်ထားလို့နေတော့… မျိုးကျော် မနေသာတော့ပဲ….
“သား ချစ်သူပါ.. သားသူ့ကို ခိုးလာတာပါ..”
မျိုးကျော်ရဲ့ အဖေက မျိုးကျော်ကို မျက်မှောင်ကြီးကျုံ့ကြည့်ရင်းးး
“ပြောတော့ကျွန်တော် မိန်းမ မလိုချင်ဘူးလေး ဘာလေးနဲ့ လိုချင်တော့လည်း မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်း အခန်းထဲတောင် ရောက်နေပါလားကွ....”
“ဖေကြီးကလည်းလေ... ကလေးတွေကို... ”
“ကလေးတွေ မဟုတ်ဘူးကွ.. မင်းကြည့်အုန်း အသက်က ၃၅ ကျော်နေပြီ...”
“အဲဒါ ဖေကြီးနဲ့ တူတာလေ သားက....ဟီးဟီးးးးး ”
မျိုးကျော် အဖေနဲ့ အမေ တစ်ယောက်တပြန်ပြောနေတာကို တင်မိုးနိုင် မကြားနိုင်တော့ပါ... မျိုးကျော်ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ ထွက်လာတဲ့ စကားကြောင့် တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်ကို တွေဝေငေးမောစွာ ကြည့်နေမိတော့တယ်။ မျိုးကျော်အနေနဲ့လည်း ဒီလိုမှ မပြောရင်... ဘယ်လိုမှ ထွက်ပေါက်မရှိ ... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထည့်တွက်ရအုန်းမယ်လေ။ အဖေကတော့ ဘာမှမပြောပေမဲ့ အမေ့ရဲ့ အပြုံးကိုတော့ အမေ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေရပါတယ် ....။
“မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ မင်းလုပ်လိုက်တာ ငါတို့မိဘတွေ သိက္ခာကို ချလိုက်တာပဲ… မင်းဘာသာ ကြိုက်တဲ့မိန်းမယူ ငါဘာမှမပြောလိုဘူး.. မင်းမိန်းမယူဖို့ အဓိကပဲ.. ဒါပေမဲ့ ဒီလို မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမပုံနဲ့ သူများသားသမီးကို ခိုးပြေးတာတို့ နည်းလမ်းမကျလုပ်တာတော့ ငါတို့ကို မိန်းကလေး မိဘတွေက ဘယ်လိုမြင်မလဲ… မင်းလည်း အသက်လည်း မငယ်တော့ဘူး.. ခုကြည့်စမ်း… ငါတို့မိဘတွေ မိန်းကလေးကိုဘယ်လို မျက်နာနဲ့ ကြည့်ရမှန်းတောင် မသိဘူး… ငါထင်တာတော့ ဟိုမိန်းကလေးက နည်းနည်း မင်းက နှံနှံတက်ဖြစ်နေတာ မဟုတ်လား… မိန်းမ မယူချင် မယူချင်ဘူးနဲ့ မိဘကွယ်ရာ မိဘတွေမရှိတော့ လက်စွမ်းတွေပြနေတော့တာပေါ့ ဟုတ်လားကွ..”
အဖေလုပ်သူက မျိုးကျော်ကို အိမ်အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီး ပြောနေတာ ဘာမှပြန်မပြောချင်ပါ။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ အမေနဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ အမေကို ကူချက်ပြုတ်ပေးနေလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက မျိုးကျော်ရဲ့ စိတ်ထဲကနေ ဇင်ဆို သူချစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး အကြောင်း သူ့နှလုံးသားထဲ သူ့ဦးနှောက်ထဲက မထွက်တာခက်တယ်။ ဟုတ်တယ် ဇင်ရယ်… ကိုကြီးဒီတသက်မမေ့ဘူးကွာ… ကိုကြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ကာလပတ်လုံး ဇင်ဟာ ကိုကြီးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ရှိနေမှာပါ။ ဒါ ထာဝရပါ။ ဇင့် အကြောင်းတွေးမိတော့ အသဲထဲက တဆစ်ဆစ်နာလို့လာပြီး မျက်ရည်တွေတောင်စို့တက်လို့လာတယ်။
အဖေလုပ်သူက ပြောဆိုပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတော့ သူနဲ့ရောယောင်ပြီးလိုက်ဝင်သွားပြီး မီးဖိုချောင်ကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့... မျိုးကျော်အမေ နောက်ကနေ ပြုံပြုံးကြီး လက်ပိုက်ကြည့်နေပြီး တင်မိုးနိုင်က ထမင်းတွေလား ဟင်းတွေလား ချက်ပြုတ်လို့.. မျိုးကျော်အဖေ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်သွားတော့…..
“အောင်မလေး ဖေကြီးရယ်… သမီးကလေ ဖေကြီးကြိုက်တဲ့ ပဲကြီးဟင်းချက်နေတာ.. ဟင်းက ချက်စရာဘာမှ မ၀ယ်ရသေး ဘာမှမရှိသေးပေမဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်အောင်ချက်တာတော့ သမီးသိပ်တော်တာပဲ.. မြည်းကြည့်ပါအုန်း သမီးကြော်ထားတဲ့ အသားတုကြော်လေး ခင် တောင်အဲလောက် အရသာရှိအောင် မကြော်တတ်ဘူး..”
“ဟေ… အေး… မှန်း.... ဟာ… ဟုတ်တယ်ဟ… သမီးလက်ရာတော့ အတော်မြောက်ပါတယ်ဟေးးးး…ဟဟဟ ”
“မဟုတ်ပါဘူး သမီးလည်း ချက်တတ်သလို ချက်တာပါ အန်တီနဲ့ အန်ကယ်…”
မျိုးကျော်အမေ တချက်မျက်နှာ ပျက်သွားလို့ တင်မိုးနိုင်မျက်နှာ မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ နှစ်ယောက်လုံးကို ကြည့်နေတော့….
“သမီးကလည်း ဘယ်နှယ့် အန်တီနဲ့ အန်ကယ်လဲ.. အဖေနဲ့ အမေလို့ ခေါ်လေ… ”
တင်မိုးနိုင် အံ့သြတာလား ရှက်တာလား… ဘာပြောရမှန်းမသိ….
“ဟုတ်တယ်လေ သမီးရဲ့ အဖေတို့က သမီးရဲ့ အဖေနဲ့ အမေပဲလေ…”
တင်မိုးနိုင်ဘာပြောရမှန်းမသိ… မျိုးကျော်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေက လုံးဝ ထင်မထားတာထက် သူ့အပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် အံ့သြရသလို ၀မ်းသာလို့လားမသိ မျက်ရည်လေးတွေဝဲလာလို့ ခေါင်းလေးအောက်ငုံ့ ပြုံးပြီး..“ ဟုတ်ကဲ့ အဖေနဲ့ အမေ..” ဟု တင်မိုးနိုင် ပြုံးပြီးပြောရင်း ဧည့်ခန်းဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မျိုးကျော် သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတာတွေတော့ မျက်နှာပိုးပြန်သတ်ပြီး တည်တည်နေလိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင်စိတ်ထဲ မျိုးကျော်အကြောင်းဝင်လာတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို ခက်ထန်လို့လာတယ်။ ဟုတ်တယ် သူငါ့ကို မချစ်ဘဲ အခြေအနေအချိန်အခါရ ငါ့ကို သူ့ချစ်သူပါ သူခိုးလာပါလို့ ပြောလိုက်တာ သူငါ့ကို တကယ်မှမချစ်တာ.. ညက အဖြစ်ကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။ တင်မိုးနိုင်တွေးလေ ၀မ်းနည်းလာလေပါပဲ.. ကြည့်ပါအုန်း.. သူ့ချစ်တဲ့သူသာဆိုရင် ငါ့ကိုကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဆက်ဆံမှာပေါ့ ခုတော့ ငါ့ကို ပြည့်တန်ဆာ တစ်ယောက်လို့ မချစ်မနှစ်သက်ဘဲ ကာမဇောနဲ့ လုပ်ချင်လို့ အတင်း ယုတ်မာဖို့ လုပ်ဖို့ကြံခဲ့တာကြောင့် မျိုးကျော်အပေါ် တအားကို မုန်းလာမိတယ်….. မျိုးကျော်အမေနဲ့ အဖေကို အားနာပေမဲ့ ဒီလိုပုံနဲ့ ရှေ့ဆက်လို့ မဖြစ်.. အိပ်ပြန်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။
“ကဲ သမီးချက်ပြုတ်ပြီးပြီ ဆိုတော့ ရေးမိုးချိုးတော့နော်…. ”
“အယ်နေအုန်း ခုမှကြည့်မိတယ်… သမီးမှာ ဘာအကျီမှ မရှိဘူးထင်တယ်…. ” တင်မိုးနိုင် နှုတ်ခမ်းလေးစေ့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ခေါင်းခါပြလိုက်လို့…
“အယ်..သမီးရယ်.. အမေ့မှာလေ အများကြီးရှိတယ် သမီးနဲ့ဆို သိပ်လိုက်မှာ… သိလား ..အမေ ငယ်ငယ်တုန်းက ၀တ်ခဲ့တာတွေကိုလေ.. ငါ့သား မိန်းမယူမှ အဲဒီ မိန်းကလေးကို ၀တ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီး စုထားတာ… နှစ်တွေတောင်ကြာပါပြီ သမီးရယ် ခုမှပဲ ဆန္ဒပြည့်တော့တယ်… လာသမီး အပေါ်တက်ရအောင်…”
မျိုးကျော် အမေလုပ်သူကတော့ တင်မိုးနိုင်ကို လက်ဆွဲခေါ်သွားတာကို မျိုးကျော် အဖေက ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်ရင်း…
“ဒီသားအမိတွေ တော့ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပြီ ဟေ့..”
မျိုးကျော် အမေပေးတဲ့ အ၀တ်အစားတွေက များလွန်းအားကြီးတော့ သယ်တောင် မသယ်နိုင်ပါ … အမေရယ်.. သမီးနောက်တော့ ယူပါမယ်.. ခုလောလောဆယ် ၀တ်ဖို့လေးပါလို့ မနည်းပြောရတယ်။ အ၀တ်အစားတွေယူပြီး အမေက အခန်းပေါက်ဝထိလိုက်ပို့တယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး ဆင်းလာခဲ့တဲ့.. အမေလှည့်ပြန်သွားတော့ အခန်းကို ဖွင့်လိုက်တော့ မျိုးကျော်တစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ရင်း ဘာတွေစဉ်းစားနေလဲ မသိ... သူ့ကို ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ရေချိုးလိုက်တော့တယ်။ ရေချိုးပြီးတော့ အ၀တ်အစားလဲမယ် လုပ်တော့ မျိုးကျော်က ရှိသေးတာကြောင့် ....
မျိုးကျော် ခေါင်းထောင်ကြည့်လာတယ်…. ဘာလဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မျက်နာကို မှုန်ကုပ်နေအောင်ထားပြီး မေးဆက်ပြတယ်..
“ငါ အ၀တ်အစားလဲမယ်… နင် အခန်းပြင်ထွက်…”
မျိုးကျော် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ… နောက်ဆုံး ကုတင်ပေါ်မှ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့ တံခါးကို “ ဂျိမ်း ” ခနဲ့မြည်အောင်ပိတ်ပြီး အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းသွားတာကြားရတော့တယ်..။
မျိုးကျော် စိတ်တိုတိုနဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာမှာ ပစ်ထိုင်လိုက်တော့ တစ်ဖက်မှာ သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ မျိုးကျော် အဖေလုပ်သူက သတင်းစာကို အနည်းငယ်ချ မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး မျိုးကျော်ကို စောင်းကြည့်နေတယ်။ မျိုးကျော် သူ့အဖေကြည့်နေမှန်းသိတော့ ကိုယ်ရှိန်လေးသတ်ရင်း ခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ကယောင်ကတမ်းနဲ့ လှမ်းယူဖတ်နေလိုက်တယ်။ အမေကတော့ တင်မိုးနိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးသား.... ထမင်းဟင်းတွေကို မီးဖိုချောင်က ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ နေ့လည်စာအတွက် ထမင်းပွဲပြင်နေတုန်း…
အမေရဲ့ အာမေဋိတ်သံကြောင့် အမေကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အမေက ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အိမ်ပေါ်လှေကားကို လှမ်းကြည့်နေတယ်။ အမေကြည့်နေတဲ့ နေရာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် အသက်ရှုမှားမတတ်ပါပဲ။ တခြားသူမဟုတ်ဘူးလေ တင်မိုးနိုင်ပါ.. မျိုးကျော်အမေ ဆင်ပေးထားတဲ့ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်လေးက တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှပါတယ်။ တကယ်လှတာပါပဲ… သူ့ဆံပင်လေးကိုတွေ အကုန်နောက်ကိုစုပြီး ရစ်ထုံးထားတော့ ကြော့ရှင်းနေသလို လှေကားပေါ်ကနေ ဆင်းလာတာ ပါတိတ်ကြားက သွယ်လှတဲ့ တင်မိုးနိုင် ခြေသလုံးလေးတွေက ဆင်စွယ်လေး လျိုပြီးထွက်လာသလိုပါပဲ.. အသွယ်အ၀ိုက် အမို့အမှောက် ရှိုက်ကြီးဖိုငယ်တို့နဲ့ အသက်ရှုတောင်မှားရပါတယ်။ တကယ့်ကို လှတဲ့သူ့ရဲ့အလှပါ။ သူနဲ့ သူငယ်အဖြစ် ပေါင်းလာတာကြာပြီ သူရဲ့ အလှက ဒီလောက် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့။
“ဟယ်… သမီးကြည့်စမ်း… အောင်မလေး အမေတို့ သမီးလေးက တအားလှတာပဲ. ကြည့်စမ်း… ကြည့်စမ်း.. အမေ့ငယ်ငယ်က ထက်တောင် လှသေးတယ် ”
“မဟုတ်ပါဘူး အမေရယ်… အမေ့ ပါတိတ်တွေက ကောင်းလို့ပါ…. သမီး အိမ်နေရင်း ဒီလိုကြီး ၀တ်ရတာတောင် အားနာတယ်.. အမေက ၀တ်ဆိုလို့ပါ…”
“မဟုတ်ပါဘူး သမီးရယ်… နကိုယ်ရှိမှ နံကိုင်းထွက်တာပါ… အို.. အမေ့မှာ ဒီလိုအဆင်တွေ အများကြီးကျန်သေးတယ် သမီးမှ မ၀တ်ရင် ၀တ်မည့်သူမရှိဘူး… ကဲ.. လာသမီး ထမင်းစားရအောင်… ဖေကြီး ထမင်းစားမယ်….. ”
အယ်ဗျာ.. ကြည့်ပါအုန်း အမေတို့များ မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ ဖြစ်နေပြီ။ မျိုးကျော်တောင် ထမင်းဝိုင်းကို မခေါ်တော့ပဲ အမေလုပ်သူက တင်မိုးနိုင် လက်မောင်းလေးတွေကို နောက်ကနေတွန်းကိုင်ရင်း ထမင်းဝိုင်းကို တွန်းခေါ်သွားတော့ တင်မိုးနိုင် ကျွန်တော့်ကို တချက်လှမ်းကြည့်တယ်။ သူ့ အကြည့်က အောင်နိုင်သူတို့အကြည့်လား .. အနိုင်ယူတဲ့ အကြည့်လား ခွဲခြားမရ။ မျိုးကျော် မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။
အမေနဲ့ အဖေတို့ရဲ့ တင်မိုးနိုင်အပေါ် အကဲပိုဂရုစိုက်မှုက မျိုးကျော်မျက်လုံးထဲ စပါးမွှေးစူးစရာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ထမင်းဝိုင်းမှာ အမေနဲ့ အဖေတို့ရဲ့ ရယ်သံ… တင်မိုးနိုင်ရယ်သံသဲ့သဲ့လေး ပြုံးပြီး ခေါင်းငုံထမင်းစားနေတဲ့ ပုံကိုကအမြင်ကပ်စရာ.. ဒီလိုနဲ့ထမင်းဝိုင်းပြီးတော့ အမေက တင်မိုးနိုင်ကို ခေါ်ပြီး ရှော့ပင်ထွက်သွားတယ်။ အိမ်မှာအဖေနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်နေတုန်း မျိုးကျော်အဖေက မျိုးကျော်ကို လှမ်းခေါ်လို့ အဖေရှေ့မှာ ၀င်ထိုင်မိတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်း တင်မိုးနိုင်အကြောင်းကို စကားကျယ်ချဲ့ ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်ပါတော့တယ်။ ဘယ်လိုလိမ်မာတယ်။ ဘယ်လိုမိန်းကလေးပီသတယ်။ သားက အရွေးတော်တဲ့ အကြောင်း ပြောမကုန်အောင်ပဲ....
“အဖေတို့တွေ နည်းနည်းတော့ မပိုလွန်း ဘူးလားဗျာ.. ခုမှတွေ့တာ တစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်နော်…”
“အေး.. ငါတော့ ပိုမပိုမသိဘူး မင်း အမေကတော့ အိုဗာဖြစ်နေပြီ…. မင်းအမေကြောင်း မင်းသိတယ်နော်… နေပါအုန်း မင်းကို ငါမေးပါအုန်းမယ် မင်းနဲ့ ကောင်မလေးက အဆင်ပြေရဲ့လား တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်… မင်းတို့ကို ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်တွေဘာတွေများ ခုနေလားဟ... နောက် ကောင်မလေးကို ချစ်ကောချစ်ရဲ့လားဟ…”
အဖေပြောနေတာကို သေချာပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ တင်မိုးနိုင်ကို အရင်ကတော့ ချစ်မိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာလား စွဲလမ်းမှုလား သူ့ဆီက စခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ ဇင့်က သူ့နှလုံးသားတွေ အကုန်ယူသွားပြီလေ တင်မိုးနိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့မှာ ချစ်ဖို့ရာ နှလုံးသားမှာ ကျန်မှကျန်ပါစ။ ဒါပေမဲ့ မျိုးကျော်စိတ်ထဲ ဒီနေ့လို မြင်ကွင်းမျိုး အမေနဲ့အဖေ ပျော်နေတာ... အထူးသဖြင့် အမေပျော်နေခဲ့တာလေးကို တွေ့တော့တင်မိုးနိုင်ကို စိတ်ထဲကနေ ကျေးဇူးတင်သလိုလို သူ့ရဲ့ ပြုစုမှု.. သူ့ရဲ့အလိုက်သိ နေတတ်မှုလေးတွေကို တန်ဖိုးထားချင်လာသလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အမေ့ကိုတော့ ထည့်တွက်ရမယ်.. အရင်တုန်း မိသားစုသုံးယောက်ထဲရှိတုန်းက ဒီလိုပျော်ရွင်ရတယ် ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ အဖေကလည်း သူ့အလုပ်သူသွား။ မျိုးကျော်ကလည်း အလုပ်သွား။ အမေပဲ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန် အိမ်မှာနေခဲ့ရတာတွေ များပါပြီ။
အမေ့ကိုတော့ သနားမိပါတယ်။ အမေအိမ်မှာ ဒီလိုစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်နေတာဆိုတာ တကယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ညနေဘက်ကျတော့ အထုတ်အပိုးတွေ မနိုင့်တနိုင်နဲ့ အမေနဲ့ တင်မိုးနိုင်တို့ပြန်ရောက်လာပြီလေ။ မျိုးကျော် ခါးထောက်ပြီး အိမ်ပေါက်ဝက ရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ၀ယ်လာတဲ့ အထုပ်ပိုးတွေကို လက်နှစ်ဖက်အပြည့်သယ်ပြီး တင်မိုးနိုင် ကားပေါ်က ဆင်းလာပြီး မျိုးကျော်ကို မြင်တော့ သူ့စိတ်ထဲ မလုံမလဲနဲ့ ..
“ငါ ပြောတယ် အမေကို့ ၀ယ်မပေးနဲ့လို့ ပြောတာ… အဲဒါ အမေက ၀ယ်ပေးတာ…”
မျိုးကျော်ဘာမှ မပြောပါ။ မျိုးကျော် အမေကတော့ တင်မိုးနိုင်ကို အိမ်ပေါ်သို့ ဆွဲခေါ်တက်သွားလေပြီ… ညထမင်းဝိုင်းမှာ မနက်ကလိုပါပဲ… မျုိးကျော်ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်ကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို့တောင် သဘောမထားတော့တာလား မသိ.. မျိုးကျော် ဆက်မစားတော့ဘဲ မိမိအိပ်ခန်းထဲကို ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ မျိုးကျော် အိပ်ခန်းထဲ မှောက်အိပ်နေလိုက်တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ် မသိလိုက်။ အခန်းတံခါးသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် အခန်းတံခါးပေါက်မှာ ...
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အနောက်မှာအမေ့ကို ဖျက်ကနဲ့ တွေ့လိုက်ရလို့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းပြီး အမေ့ကို ပြေးတွေ့လိုက်တယ်။ အမေတင်မက အဖေပါ ပါသေးတယ်။
“ကဲ သားနဲ့ သမီး အိပ်တော့နော်.... အမေတို့လည်း အိပ်တော့မယ်.... အော်.. သမီး.... ”
“မနက်ကျရင် အမေတို့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်စားကြမယ် သိလား.... ဟီးးဟီးး... ကဲ အိပ်တော့ သားနဲ့ သမီး....”
အမေကပဲ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ တံခါးကို အပြင်ကနေပဲ ဆွဲပိတ်လိုက်တယ် ..
“ဂျိမ်း ” ..
တင်မိုးနိုင် တံခါးသံကြောင့် တချက်တုန်သွားတယ်။ ပြီးတော့ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို ရင်မှာအပ်ပြီး မျိုးကျော်ကို အသနားခံတဲ့ အကြည့်လား မယုံတဲ့ အကြည့်လား အထင်သေးတဲ့ အကြည့်လား အကြည့်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ မျိုးကျော်လည်း.... တင်မိုးနိုင်ကို သေချာပြန်ပြီး စိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။
“အဲဒါ ဘာဖြစ်နေတာလဲ… ”
မျိုးကျော်ပြောလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျက်မှောင်လေးကျုံ့ပြီး …
“နင် ငါ့ကို ဘယ်လိုစပြီး ယုတ်မာရမလဲလို့ စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်လား…”
“ဘာ…. ဟားဟားဟား… နင့်ကို ငါက ……. .ထားတော့ မနေ့ကညက တော့ ငါမူးနေလို့ ..ခု..နင့်ဘာသူ စိတ်ချလက်ချသာ အိပ်… နင့်ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိဘူး…. ”
မျိုးကျော်ပြောနေပေမယ့် တင်မိုးနိုင်ကတော့ ပေကပ်ကပ်နှင့် မျိုးကျော်ကို ကြည့်နေဆဲ…
“ဟုတ်ပြီ… ငါက နင့်ကိုတစ်ခုခုလုပ်လို့ကတော့ အော်သာအော်လိုက် အဖေနဲ့အမေ ပြေးလာမှာပဲ ”
မျိုးကျော် ပြောပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် တက်အိပ် နေလေတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ ကုတင်ပေါ်တက်အိပ်ရမလို ထိုင်ရမလိုလို ယောင်လည်လည် ဖြစ်လို့နေတုန်း မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရှိရာဘက်ကို မှောက်လျက်အိပ်ခါ လှည့်မကြည့်ဘဲ..
“ဟို…. ဗီဒီယိုတွေထဲကလိုတော့ ငါလည်းအောက် ဆင်းပြီးမအိပ်နိုင်ဘူး .... နင့်ဘာသာနင် ဘယ်လိုအိပ်အိပ် ငါတော့အိပ်ပြီ….”
မျိုးကျော် သူ့ဘာသူတယောက်ထဲ ပြောဆိုပြီး အိပ်သွားလေပြီ။ တင်မိုးနိုင် ကုတင်အသာကပ်လာပြီး ခေါင်းအုံးယူပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ဆင်းအိပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေမိတယ်။ မျိုးကျော် မနေ့က ညလိုမျိုး ထပ်မလုပ်မှာတော့ သူယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ကိုယ်နဲ့ ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ကုတင်ထဲ အ်ိပ်ရမှာတော့ သူမရဲသေးပေ။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာ တင်မိုးနိုင် တအားကို အိပ်ချင်နေပြီလေ။ မနေ့ညကလည်း တညလုံးငိုပြီး မနက်ပိုင်းလေးမှသာ အိပ်လိုက်ရတယ်။ မနက်ကျတော့ မျိုးကျော် အမေကို မီးချောင်ဖိုချောင်မှာ ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့ ကူလုပ်ပေးနေရတာမို့ တအားကို ပင်ပန်းလှသလို နေ့လည်က မျိုးကျော်အမေနဲ့ အပြင်ရှော့ပင်ထွက်တော့လည်း တလမ်းလုံး မအိပ်ငိုက်အောင် ထိန်းနေရသေး.. တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေ ယိုင်လဲချင်နေသလို... ပစ်လှဲ ပစ်ချင်စိတ် ပေါက်နေပြီလေ။ ခုလဲကြည့် အိပ်ချိန်ရောက်နေတာတောင် အိပ်ဖို့နေရာ မရှိပါလား။ တင်မိုးနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သနားနေမိတယ်။ ပြောရင်းနဲ့မှာ မျိုးကျော် ဟောက်နေလေပြီ။
မျိုးကျော်ရယ် ငါဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟယ်။ ခုလို နှစ်ယောက်ထဲ နင်နဲ့ ဟိုးနေ့က ရှိစဉ်တုန်းက ငါမှာ ပျော်လိုက်တာဟယ်။ နင်မသိအောင် နင့် ဒုတ်ကို ကိုင်ခဲ့ စုပ်ခဲ့တုန်းက ငါမှာလေး ရင်ခုန်လွန်းလို့ သေရတော့မယ်။ ခုများတော့ ငါ နင့်ကို စိတ်ပျက်ရမလားဟာ… နင်ငါ့ကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ… ငါနင့်ကို ဘယ်လိုယုံရမလဲဟယ်။ ငါ့ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ ငါ့ရဲ့ တကိုယ်လုံးကို နင့်ကိုပေးဆပ်ရမှာလေဟယ်။ ငါ ၀န်ခံရရင် နင့်ကိုချစ်တယ် အရမ်းချစ်တယ် စွဲလမ်းတယ်ဆိုလည်း မမှားဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက မနက်ဖြန်မှာ မသေချာတော့ သလိုပဲ။ တင်မိုးနိုင်တွေးနေရင် အိပ်ရေးပျက်တာ တကြောင်း၊ တနေ့လုံး မအိပ်ပဲ ပင်ပန်းထားတော့ မိုက်ခနဲ့ ဖြစ်သွားတာနဲ့ ကုတင်ကို လက်နဲ့ ထောက်ပြီး ခဏထိုင်နေလိုက်တယ်။ ကြာကြာတောင် မထိုင်လိုက်ရ အိပ်ချင်စိတ်က တားမရတာကြောင့် အသာလှဲချပြီး မျက်လုံးလေးပိတ်ခါ ခဏမှေးနေလိုက်တော့တယ်။
အချစ်…အချစ်…အချစ် တကယ်ကို အေးချမ်းသလို နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်ပါ။ တင်မိုးနိုင် နားလည်လာသလိုပဲ။ မနေ့က မျိုးကျော်သူ့ အပေါ် မူးမူးနဲ့ ကျူးလွန်ချင်တဲ့ အပြုအမှုတွေလုပ်ပေမဲ့ သူ့ကို စိတ်ထဲ ဗွေမယူချင်မိပါ။ သူနဲ့ တစ်ကုတင်ထဲ နေရတဲ့ ဘ၀ဟာ စိတ်ထဲ လုံခြုံသလိုပဲ။ မျိုးကျော်ရယ် နင်က ယောက်ျား တစ်ယောက်ပါ ငါလေ… အားကိုချင်လိုက်တာ။ ငါတို့ မိန်းမသားတွေက နင်တို့ပြုသမျှ နုရမယ့် ဘ၀ပါဟယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကြင်နာယုယမှုကို ဘယ် ချစ်သူမိန်းကလေးဆို ခံချင်တာပေါ့ဟယ်…. လေယူရာတိမ်း ယိမ်းနွဲ့ပါးလျပြီး နုနယ်လှတဲ့ ပန်းလေးကိုမှ ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ် မညာတာတဲ့ လေပြင်းအမုန်း မုန်တိုင်းလို လက်ကြမ်းတွေနဲ့ ခြွေယူချင်ရတာလဲဟယ်။ ငါမှာလေ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ နင့်ရဲ့ကြင်နာတဲ့ ပွတ်သပ်မှုလေးတွေ၊ နုနယ်တဲ့ ကိုင်တွယ်မှုလေးတွေ၊ နွေးထွေးစေတဲ့ အထိအတွေ့လေးတွေ၊ မေ့မျောနိုင်တဲ့ နင့်ရဲ့ အနမ်းလေးတွေ ကြားမှာ ငါမှာလေစိတ်ကူးတွေ အတွေးတွေထဲတင် အသက်ကို မနည်းလုရှုနေရတဲ့ ဘ၀ပါဟယ်။ နင့်မှာ အရင်ကလို ကြင်နာမှုတွေ ယုယမှုတွေက ပျောက်ဆုံးနေတာလားဟယ်…။ ငါ ချစ်တယ်ဟယ်… ငါလေ နင့်ကို ချစ်တယ်။ အေးပြီး ချမ်းစိမ့်လှတဲ့ ညလေးမို့ထင်ပါတယ် မနက်ပိုင်း ရောက်လေ အချမ်းဓာတ်ကပိုလာသလို ခံစားရတယ်။ တအားနဲ့ အိပ်ချင်နေလို့သာ အချမ်းဒဏ်နဲ့ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်မိနေတော့တယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ ချစ်သူလေး တစ်ယောက်လောက်သာရှိရင် အရာရာပြည့်စုံမှာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်။
ကြာလေ အအေးဓါတ်တွေက ပိုလာတယ်ထင်ရပါတယ်။ လက်မောင်းလေးတွေတောင် အေးခဲပြီး တောင့်လာတယ်လို့ ခံစားလာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအေးခဲပြီးတောင့်နေတဲ့ ခံစားမှုကို အရာတစ်ခုက ဖြိုခွဲပြီး ၀င်လာတယ်။ အဲဒါကတော့ နွေးထွေးတဲ့ လက်တစုံက သူ့လက်မောင်းပေါ် “ဖက်” ကနဲ့တင်လာပြီး ဖက်လာတယ်။ ဒီလက်လေးတစုံက ပေးလာတဲ့ နွေးထွေးမှုက တကိုယ်လုံး အနည်းငယ် ပြန့်နှံ့စီးဆင်းနေသလို ခံစားရတာကြောင့် မလှုပ်မယှက်ပဲ ငြိမ်နေမိတယ်။ တင်မိုးနိုင်ငြိမ်နေတော့ လက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ကိုယ်လေးနားတိုးလို့လာလိုက်တာ သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ ကိုယ်ငွေ့အရှိန်လေးကို ကြက်သီးထမတက် ခံစားလိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဆုတောင်းနေမိတယ် ထပ်တိုးပါအုန်းလားဟင် လို့... သူ့ဘက်ကနည်းနည်းလေး လှုပ်လာတော့ ကိုယ်ကပဲ အလိုက်သင့် နောက်ဆုတ်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်မိတယ်။ ဒီတခါတော့ သူ့ရဲ့လက်အစုံတွေက ကျွန်မတကိုယ်လုံးကို ဆွဲယူသိမ်းသွင်းနေပြီလေ။ ငြင်းဆန်မဲ့ အင်အားမရှိဘူးလေ ကျွန်မတကယ့်ကို ချမ်းနေပြီ။
“ အိုးး…” တကယ်ပဲ နွေးထွေးသွားပါလား…
“အယ်တော် ”သူ့လက်အစုံတွေက ကျွန်မလက်မောင်းတွေက တဆင့် ကျွန်မရဲ့ နို့အုံတွေပေါ် ဖိကပ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့.. ချမ်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်ရောက်လို့ သွားလဲ မသိ.. ကျွန်မ မရတော့ဘူးလေ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ထပ်တိုးမိသလို သူ့လက်တွေကို ကိုင်ပြီး ကျွန်မရင်ခွင်အတွင်းထဲထိ ပို့ဆောင်နေမိတယ်။ သူ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကျောတစ်ခုလုံးက နေရာလွတ်မရှိအောင် ကပ်ပြီးထပ်နေပြီလေ။ တကယ် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ ချမ်းနေတဲ့ ခံစားမှုတွေ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်ကုန်မှန်း မသိပါဘူး။
စိတ်ထဲပိုပြီးလှုပ်ရှားစေမဲ့ အရာတခုက ကျွန်မတင်ပါးနားကို ထိလို့နေတယ်လို့ တချက် ခံစားလိုက်ရတယ်။ နွေးထွေးမှုရဲ့ အကြီးဆုံးခံစားမှုပါ။ ကျွန်မတင်ကို နည်းနည်းလေး နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ သူက ရှေ့ကိုတိုးလို့လာတယ်။ ကျွန်မစိတ်တွေကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူးလေ ကျွန်မနောက်ကို ထပ်တိုးလိုက်တော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်မဆီးခုံနားကို ကိုင်ပြီး သူ့ကိုယ်အတွင်းကို ထပ်ဆွဲသွင်းလို့ ကျွန်မအလိုက်သင့်ပဲ တိုးလို့နေမိတယ်။ တုတ်တချောင်းမာထန်ပြီး နွေးထွေးနေတဲ့ သူ့ရဲ့ဒုတ်ကြီးက ကျွန်မရဲ့ ဖင်ကြားထဲအမြောင်းလိုက် နေရာယူထားလို့နေပြီ။ ထမီခံနေလို့သာ တော်သေးတယ် ဆိုပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ထိတွေ့မှုရဲ့ အဆုံးအစွန်ပါပဲ။ ကျွန်မ ဒီအချိန်မှာ သူက သေဆို သေရဲပါပြီ။ လုပ်ချင်သလိုသာလုပ်ပါတော့။ သောက်ရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမလည်း ဖြစ်ခဲ့တာကြာပါပြီ.. ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ မမှုချင်တော့ပါ။ ကျွန်မရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ထိန်းနိုင်စွမ်းလည်း မရှိတော့တာမို့ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေက သူဒုတ်ရှိတဲ့နေရာကို မမြင်မကမ်းနဲ့ အသာလေးရွေ့လျားပြီး သွားကိုင်မယ်လုပ်တော့ သူ့လက်အစုံက ကျွန်မလက်တွေကို လှမ်းဖမ်းဆုပ်ကိုင်ပြီး... သူ့ဒုတ်ရှိရာနေရာကို သယ်ဆောင်သွားလို့ ပေးနေတယ်။ ကျွန်မ သူ့ဒုတ်ကို နောက်ပြန်လေး သေချာဆုပ်ကိုင်မိသလို ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်တိုင်းဟာ မီးတောင်ကြီး တချက်တချက် ပေါက်ကွဲနေသလိုပါပဲ။ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ ကြားက သူကလည်း တိုးလို့သာဖက်လာတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လက်ကြမ်းကြီးတွေက ကျွန်မနို့တွေကို အကျီအတွင်းနှိုက်ပြီး ထွေးပွေ့လို့ထားပြန်တယ်။
ခဏလောက် ငြိမ်သက်နေပြီးမှ သူက မရပ် သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ တစောင်းလေး နောက်ကျောပေးခိုက်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ပေါင်ကို လက်ကြားလျိုပြီး သူလက်ကြီးတွေနေရာယူလာပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မရင်ခုန်သံတွေက မမှန်တော့ဘူးလေ။ အသားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်လို့နေချေပြီ။ တွေးနေရင်း သူလက်တွေက ကျွန်မရဲ့ ပေါင်တွေကို အတင်းဆွဲမပြီး သူ့ရဲ့ဒုတ်ကို ကျွန်မပေါင်ကြားထဲ ညပ်ထားပြီးပြန်ဖိထားလေတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ် မသိပေမဲ့ ကျွန်မကိုယ့်ခန္ဓာတခုလုံး စိမ့်ကနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။ နောက် သူလက်တွေကပဲ ကျွန်မလက်တွေကို ကိုင်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အပေါ်ကနေ အရှေ့ဘက်မှာ ကျွံထွက်နေတဲ့ သူ့ဒုတ်ကို အုပ်ကိုင်စေပြီး ကိုင်ခိုင်းကာ အရှေ့ကို ဆွဲထုတ်ခိုင်းနေတော့တယ်။
ကျွန်မသဘောပေါက်ပြီလေ သူ့ဒုတ်တချောင်းလုံးကို ကျွန်မပေါင်ကြားထဲထည့်ပြီးညပ်ထားတော့ ကျွန်မပိုပြီး အနွေးဓာတ်ပိုရတယ်ဆိုတာခံစားလာရတယ်။ ကျွန်မလက်တွေက ကျွန်မရွှေခရုလေးအောက် ကျွန်မပေါင်ကြားအရှေ့မှာ ငေါထွက်နေတဲ့ သူရဲ့ဒုတ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ သူကလည်း ကျွန်မနို့တွေကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး နှစ်ယောက်သား မနက်ခင်းရဲ့ အေးချမ်းမှုကို အံတုနိုင်ခဲ့ပြီလေ။ တကယ်ပါ ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခွင်… ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်ဆိုတာ ကျွန်မဘ၀မှာ ပထမဆုံးမို့ ကျွန်မ အရမ်းကို မက်မောမိပါပြီ။ တန်ဖိုးထားမိပါပြီ။ နောင်လည်း ပိုတန်ဖိုးထားတော့မယ်… ကျွန်မ သူ့ဒုတ်ကိုကိုင်ပြီး ဆက်အိပ်နေမိတော့တယ်…
တင်မိုးနိုင် အိပ်ယာက နိုးလာလေပြီ။ တစ်ညလုံးအိပ်လိုက်ရတော့ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတွေလား…မျက်လုံးမဖွင့်သေးဘဲ ဆက်မှိန်းနေမယ်လုပ်တော့.. မိမိပေါင်ကြားမှာ တခုခု ခံနေသလို ခံစားရတာနဲ့ လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့ ....
“ ဟာ…” ကြည့်စမ်း မျိုးကျော်.. ....
“အမ်” ခုမှ သတိထားမိတယ် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့တွေကို မျိုးကျော်တယောက် အင်္ကျီအတွင်းထဲထိအောင် လက်နဲ့ နှိုက်ပြီး ကိုင်ထားတယ်… ဒါတင်မက “အာာ..ဘာကြီးလဲ ဘာတွေလဲ…”
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ထမီတွေမှာ မျိုးကျော်ရဲ့ သုတ်တွေထွက်ကျပြီး ပေကျံလို့နေတယ်။ အချို့က ချောက်ပြီးကပ်နေသလို ထူထပ်တဲ့ နေရာတွေကတော့ စိုစွတ်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့လက်မှာ ကပ်စေးကပ်စေးနဲ့ မို့…. စိတ်ထဲ ရှက်စိတ်လား ဒေါသစိတ်လား ထောင်းကနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး.. တင်မိုးနိုင် ခုမှ သိသည်။ ညက သူအိမ်မတ်ထဲမှာလိုလို ရောင်ရမ်းနေတာလိုလို ဖြစ်နေပြီး တင်မိုးနိုင် အနောက်ကနေ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူ့ပေါင်းကြားထဲ သူ့ရဲ့ဒုတ်ကို ထည့်ကလိပြီး အိပ်နေတယ် ဆိုတာ မျိုးကျော်နဲ့ တကယ်အပြင်မှာ ဖြစ်နေပါလား။ ဟယ်... ငါနဲ့နော်.. ဘာလို့
လိုက်လျော့ရပါလိမ့်။ တင်မိုးနိုင် ပြာပြာသလဲ သူ့ရွှေခရုလေးကို စမ်းကြည့်တယ်။ သူဒုတ်ကြီး ရွှေခရုလေးထဲကို ထိုးထည့်သေးလားလို့။ ရွှေခရုလေးကတော့ အောင့်ခြင်း နာခြင်း တခြားထူးထူးခြားမရှိလို့ တော်သေးသည်။ မျိုးကျော် ဒင်းကလဲ ငါ့ကိုသာ မချစ်တာ အခွင့်အရေးက အပြည့်အ၀ကို ယူတဲ့ ကောင်ပဲ....
မျိုးကျော် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လူးလှိမ်ပြီး မျက်စိကိုပွတ်သပ်ရင်း
“နင် ….နင် ငါ့ကို ဘာလုပ်တာလဲ..လွတ်စမ်း..…”
တင်မိုးနိုင် ကုတင်ပေါ်မှ ပျာပျာနဲ့ ဆင်းပြီး အ၀တ်အစားတွေကို ပြင်ဝတ်နေသည်။
“နင်..ယုတ်မာတာ… နင်နဲ့ ငါ စာရင်းရှင်းမယ်.. နင်ထ…”
“ဟာကွာ….. အိပ်ကောင်းနေတာကို လာရှုပ်နေတယ် … ဘာလဲပြော..”
“ငါ ညထဲကပြောချင်နေတာ… ငါ ပြန်မယ်… နင်လို လူစိတ်မရှိတဲ့သူနဲ့ မနေဘူး..ပြန်မယ်… ”
“ပြန်ပြန် ကြိုက်တဲ့ အချိန်ပြန်… ”
တင်မျိုးနိုင် စိတ်မြန်မြန်လက်မြန်ပဲ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီးမှ တချက်စဉ်းစားပြီး သူလို ယုတ်မာတဲ့ လူမျိုးကို ပစ်ပစ်ခါပြောပြီးမှ ပြန်မယ်ဟ စိတ်ကူးရင်း မျိုးကျော်ဆီသွားကာ ....
“အေးပေါ့လေ နင်က ခုတော့ ဒီစကားပြောပြီပေါ့… သူများသားပျို သမီးပျိုကို ဗလက်ကာယ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး နင်ခုလိုပြောတာ တော်တော် အောက်တန်းကျတဲ့ ကောင်ပါလား… နင်က ခွေးလောက်တောင် အဆင့်မရှိဘူး..”
မျိုးကျော်သူ့ကို ခွေးနဲ့ ခိုင်းနိူင်းပြောလာတာကြောင့် ဒေါသထွက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ကုန်းရုန်းထကာ ....
“နင်က ခွေးသာသာပဲ ရှိတယ်… နင်သိလား…”
“နင့်ကို ငါက ဘာလုပ်နေလို့လဲ…. ”
“နင် ခုမှ ..ဘာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလဲ… နင်ဟာ… ခွေးစိတ်ဓာတ်ပဲ…..”
“နင်ဟာ… တကယ့် မိမဆုံးမ ဖမဆုံးသားပဲ….. သူများသားသမီးကို လုပ်ချင်သလို လုပ်ပြီးမှ…”
မျိုးကျော် သူ့မိဘတွေပါ ပါလာပြီမို့ ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်ခါ….
“မတော်ဘူး မတော်ဘူး… မတော်တော့ နင်က ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ….”
“ဟာ… မတော်ရင်လဲ ကဲကွာ…. ကဲကွာ….”
မျိုးကျော်ရဲ့ အားပါသော သူ့လက်တွေနဲ့ တင်မိုးနိုင်ပါးကို နှစ်ချက် ရိုက်လိုက်ရာ တင်မျိုးနိုင်မှာ… ခွေခွေလေး လဲကျသွားရာ……
“အောင်မလေး သမီးလေး…..သေပါပြီ.. သမီးလေးရယ်”
မျိုးကျော် ဘာမှကို ရှင်းပြချိန်မရ အခန်းတံခါးပေါက်တွင် အဖေနဲ့ အမေ ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေတယ် မသိ.. အဖေ၀င်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို လက်သီးနဲ့ တချက်ထိုးတော့တယ်။ ကျွန်တော်မျက်နှာကို လက်နဲ့ အုပ်ပြီးကိုင်နေစဉ်မှာ တင်မိုးနိုင်ကို အမေက ပြေးပွေ့ထူးမပြီး ဖေးမနေတယ်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ အမေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ချုန်းပွဲချငိုလို့….
“အန်တီ အန်တီ...သမီး ပြန်မယ်… ပြန်မယ်… သူသမီးကို နှိပ်စက်တယ်…. အရမ်းရက်စက်တယ်…”
“အောင်မလေး သမီးလေးရယ်… အမေ့သမီးလေးရယ်.. သမီး ဘယ်မှမသွားရဘူး… အမေ..ရှိတယ်… သူ..သမီးကို ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး သိလား”
အော်… အမေ့သမီးလေးတဲ့ ငါကတော့ သူတို့သားမဟုတ်တာကျလို့ အဖေကို လှမ်းကြည့်တော့… ကျွန်တော့်ကို စားတော့မယ် ၀ါးတော့မယ် ပုံနဲ့မျက်လုံးတွေက မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လျက်။
“ဟေ့ကောင်….. မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ …ခု ထွက်သွားစမ်း….”
အရွယ်ရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက အဖေ့ရဲ့ ဆုံးမမှုကို မခံရတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်တောင် ကျော်ခဲ့ပါပြီ… ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ မိန်းမကိစ္စနဲ့မှ ငါ့မှာ ကြီးကောင်ကြီးမားကြီးနဲ့ ဆုံးမခံရ အထိုးခံရမို့ မျိုးကျော် ဒေါသထွက်ခါ အခန်းထဲမှ ထွက်ခါ အိမ်အပေါ်ထပ်မှ ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်..။
လူနာကုတင် ၃၁ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) ဆက်ဖတ်ရန် »
အပိုင်း (၅) သို့..
အပိုင်း (၄) သို့..
အပိုင်း (၃) သို့..
အပိုင်း (၂) သို့..
အပိုင်း (၁) သို့..